HomeDUNIDAYURUB36 oo ka socda HungaryEkol Logistics waxay isku xireysaa Shiinaha ilaa Hungary maalinta 17
27 / 04 / 2017 36 oo ka socda Hungary, 86 Shiinaha, Aasiya, YURUB, Nidaamka Isgaadhsiinta ee Intercity, DUNIDA, tareenka, GUUD
Ekol logistics wuxuu Shiinaha ku xiraa Hungary maalinta 17: shirkadda labaad ee ugu weyn ee isku-xirka logistikada ee Ekol Logistics waxay soo gaarsiisay weelkii xNUMX gaari-xamuul oo ay Xian ka soo rartay Shiinaha kuna sii jeeday Budapest, Hungary maalintii 41.
Turkey leh maalgelinta ay muuqda warshadaha badaha iyo shirkadda Europe ee labaad ee ugu weyn intermodal logistics Ekol Logistics, 41 weel baabuur in la geliyo magaalada Chinese ee Xi'an, Hungary ee caasimada Maalmo 6, sarraysa dalka 17 ayaa gaaray Budapest.
Wasiir ku-xigeenka Hungary Tamas Molnar, Danjiraha Shiinaha u fadhiya Hungary Duan Jielong, Maareeyaha Hungary Akos Kovacs iyo marti sharaf badan ayaa ka soo qayb galay xafladda loo qabtay sababtuna tahay imaatinka tareenka 41 ee Gawaarida Budapest Mahart ee Terminal.
Wasiir ku-xigeenka Wasiiru dowlaha Hungary Tamas Molnar ayaa khudbad ka jeediyay xafladda, tareenka ka yimid Shiinaha 9 kun 300 kiiloomitir si uu u gaaro 17 maalin Budapest gaari, dhaqaalaha dalka ayaa calaamad u ah horumarada wax weyn ka tari doona, ayuu yiri.
Cabbirka ganacsiga ee Hungary oo ay weheliso Shiinaha 2016 bilyan 8 bilyan 900 milyan oo doolar, waxay muujineysaa in Wasiir Ku-xigeenka Hungary ee Gobolka Tamas Molnar, Ekol Logistics ay tahay shaqo taariikhi ah oo ka mid ah jilayaasha ugu muhiimsan ee mugga ganacsi ee Bariga Fog, ayuu yidhi.
Isagoo ka hadlayey xafladda, safiirka Shiinaha ee Hungary Duan Jielong ayaa hadal uu soo saaray ku sheegay in badeecadaha laga soo saaray Shiinaha ay gaareen khasaare weyn oo waqti ah si loo gaaro Hungary, Ekol Logistics ayaa sheegay inay uga mahadcelinayaan fursadda lagu kordhinayo wax soo saarka.
Magaalada Xi'an ee Shiinaha, buundada logistikada ee Hungary oo la aasaasay inta u dhaxeysa Hungary, labada dal waxay door aad u muhiim ah ka ciyaareen baaxadda ganacsi ee u dhaxeeyay Safiirka Shiinaha u fadhiya Hungary Duan Jielong, isagoo raaciyay in dadaalka wadajirka ah ee Hungary iyo dowladaha Shiinaha ay tahay in la qaddariyo.
Munaasabadda kadib, kaqeybgalayaashu waxay u mahadceliyeen maareeyaha Ekol Logistics Hungary Country ee Akos Kovaca, oo ka mid ah naqshadeeyeyaasha Xi'an - Budapest Route, waxayna caddeeyeen inay rabaan inay Hangari noqdaan kan ugu sareeya waxsoosaarka ka imanaya Shiinaha ilaa Yurub.
HALKII EKOL HALGALKA UU UGU BILAABAY
Ekol Hungary, waaxda Hangari ee ka hawlgasha Ekol Logistics, waxay xayiraysaa kontaynarkeeda xNUMX gaari-gacmeedyada oo laga keenay Xi'an, Shiinaha, kana gudbaya Kazakhstan, Xiriirka Ruushka, Belarus, Poland iyo Slovakia, 32 kun oo 41 kiiloomitir ka dib Caasumada Hungary Budapest ku.
Tareenka dhererkiisu yahay MNUMX mitir, oo leh laba tareeno iyo gaari xNUMX ah, ayaa ka ambabaxay Xian City, Shiinaha on 650 Abril 41, oo ku soo dhowaaday Mahart Container Terminal on 4 Abriil 2017. Wadada Tareenka ee Hungarianka MAV iyo Shirkadda China Railway China Railway International Group (CRIG) ayaa door firfircoon ka qaatay gaadiidkan.
Isha: www.denizhaber.com.t waa
Maanta taariikhda: 13 Abriil 1896 Baron Hirsch wuxuu u dhintay uurjiifka Maskaxda ee Hungary.
Midowga Yurub wuxuu taageeri doonaa soo saarida Wagon ee Hungary
Ogeysiiska Qandaraaska: Adeegga Maqalka